Backwashing အေလ်ာက္ပိတ္ပင္ျအိမ္ရာစနစ် DFM DFG စီးရီး-တရုတ် Backwashing အေလ်ာက္ပိတ္ပင္ျအိမ္ရာစနစ် DFM DFG ရီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း၊စက်ရုံ–Sffiltech
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် filtering ကိုအိမ်ရာစနစ်
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အတွင်းခြစ်စစ်ထုတ်သည့်အရာ - DFM / DFG စီးရီး
DKD သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးစစ်ထုတ်သည့်အိမ်ရာထုတ်လုပ်သည်။ အပြင်အဆင်ခြစ်ရာကို DFX motor သုံးခုခွဲထားသည်။ အတွင်းပိုင်းခြစ်မောင်းနှင် DFM မော်တာ; အတွင်းပိုင်းခြစ်မောင်းနှင် DFG pneumatic မော်တာ; စက်မှုဆိုင်ရာဖောက်သည်များ၏စက်မှုဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အခါသမယများအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးစစ်ထုတ်သည့်အိမ် (DFM motor driver)
မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေး filter filter ၏အိုးအိမ် (DFG pneumatic motor မောင်းနှင်မှု)
DFM စီးရီးခြစ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေး filter filter (DFM filter for short) သည် DKD ၏လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင်းပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ခြစ်သည့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေး filter filter ဖြစ်သည်။ အမှုန်အရောအနှောများ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်၏ filter element ကိုအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းစေရန်စက်မှု curettage နည်းလမ်းဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အွန်လိုင်းစစ်ထုတ်ခြင်းကိုနားလည်နိုင်သည်။ DFM filter ကိုအိမ်ရာသည်အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသော viscosity filter များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ သက်ဆိုင်သော viscosity သည် 10000CPS အထိရှိပြီးတိကျသောအကွာအဝေးသည် 50-1500 microns ဖြစ်ပြီးတိကျစွာစစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် filter element ၏အညစ်အကြေးများအားလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ မြင့်မားသော viscosity အတွက်အသုံးပြုသည်၊ fibrous အညစ်အကြေးအရည်စစ်ထုတ်သည်။ DFM filter အိုးသည် DKD ၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအရည်အသွေးသို့ရောက်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအညစ်အကြေးများကိုစစ်ထုတ်သည့်အစဉ်အဆက်စစ်ထုတ်သည့်အရာသည်မကြာခဏပိတ်ဆို့ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသော filter များသို့မဟုတ်မကြာခဏလက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကိုသာရွေးချယ်နိုင်သည်။ DFM filter အိုးများသည်အဆင့်မြင့်ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဤပြthisနာမျိုးကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအညစ်အကြေးများပါ ၀ င်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်း၊ ရေ၊ ကော်၊ ရေစေး၊ ပိုလီမာ၊ ရေနံနှင့်အခြားရေအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောအရာများကိုစစ်ထုတ်သောအခါ၎င်းသည်သိသာသောအားသာချက်များနှင့်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသောနည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နိမ့်မှုနှင့်အတူ DFM filter သည်တုန်ခါမှုဖန်သားပြင်၊ အိတ်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ တောင်းစစ်ခြင်းနှင့်နောက်ကျောအဝတ်လျှော်အမျိုးအစား filter filter များကဲ့သို့သောနေရာများစွာတွင်ရိုးရာလက်စွဲ filter ကိုတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးလိုက်သည်။
DFM / DFG ခြစ် filter ကိုဒြပ်စင်
DFM / DFG အလုပ်လုပ်မူ
အရည်သည်ဝင်ပေါက်မှစီးဆင်းသည်၊ အတွင်းပိုင်းလိမ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြစ်စက် ၁၀၀% ကို filter element ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကပ်သည်၊ အရည် element filter ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်မှအပြင်သို့စီးသည်။ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်အညစ်အကြေးများနှင့်ထွက်ပေါက်မှထွက်လာသောအရည်များကိုပိတ်လိမ့်မည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအညစ်အကြေးများမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးများလာပြီး၊ differential pressure သည်မြင့်တက်လာသည်။ ၎င်းသည် differential pressure သို့ပုံမှန်ပုံမှန်ပုံမှန် filter လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မော်တာမောင်းနှင်ခြင်းခြစ်ခြင်းရွေ့လျားမှုသန့်ရှင်းရေး filter ကိုဒြပ်စင်, scraper ဖြီးသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထုတ်လွှတ်ထိန်းချုပ်ဖို့အရည်နည်းပညာ၏ parameters တွေကိုချဉ်းကပ်ရန် fuzzy ထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီ၏နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် filter ၏ wear နှင့်အရည်စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကိုအနည်းဆုံးအထိခန့်မှန်းပေးပါလိမ့်မည်။ ဤမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုဒီဇိုင်း (မူပိုင်ခွင့်အမှတ် 200820033272.2) ကို အသုံးပြု၍ တစ်ခုတည်းသော filter တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် helical flessical helical scraper သည် filter element ကိုဖယ်ရှားသောအခါအညစ်အကြေးများသည်အောက်သို့ centrifugal force ကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ စုဆောင်းထားသောလိုင်သို့မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ခြစ်ခြင်းဖြင့်ယူသွားခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ filter element ၏မျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းပြီးသောအခါ filtration စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ filter ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါစီးဆင်းမှုကိုမနှောင့်ယှက်သင့်ပါ။
ဘယ်လိုညစ်ပတ် status ကိုလွှတ်ပေးသလဲ?
အချို့သောသန့်ရှင်းရေးစက်ဝန်းများအကြာတွင်အညစ်အကြေးများသည်ပမာဏတစ်ခုအထိစုဆောင်းမိသည်။ PLC ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်သည်မိလ္လာအဆို့ရှင်အညစ်အကြေးများပါ ၀ င်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်ကိုအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်နိုင်သည်။ လိုအပ်ပါကလည်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1.Screw ရိတ်, အထူးသဖြင့် viscous အရည် filtering မှာ, viscous ရပ်ဆိုင်းမှုအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှား;
2.Structure သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးဖြုတ်တပ်ရန်လွယ်ကူပြီး filter element ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
၃။ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းမှစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်လေးလံသော filter ကိုဒြပ်စင်များအစားထိုးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းလုပ်ခြင်း။
ပစ္စည်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးစရိတ်များ၊
အမျိုးမျိုးသော filter လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်မြင့်မားသောတိကျသော filter element များတပ်ဆင်ထားပြီး၊
၆။ filter ၏ဖိအားဆုံးရှုံးမှုသည်အလွန်နည်းသည်၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည်တည်ငြိမ်သည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုကယ်တင်သည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်သည်။
7. အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန် filter ကိုပိတ်လိုက်ခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံစိတ်ချရသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။
8. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်များစုစည်းမှုမြင့်မားပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တန်ဖိုးမြင့်သောပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၁၀။ ကမ္ဘာ့လူသိများသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လည်ပတ်မှုစရိတ်နည်းခြင်း။
11. စက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု DCS မျက်နှာပြင်၊ အဝေးထိန်းလေ့လာရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
12.Motor, pneumatic မော်တာကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီရွေးချယ်သည်။